Sida loogu isticmaalo fiilooyinka aan rasmiga ahayn iyo agabyada ka shaqeeya iOS | Wararka IPhone
Sida loo adeegsado fiilooyinka aan rasmiga ahayn iyo agabyada ka shaqeeya iOS
Paul Aparicio | | Qalabka IPhone, Casharrada iyo buugaagta
Inta badan akhristayaasha (iyo tifaftireyaasha) ee iPhone News sida wax soo saarka Apple. Wax soo saarka nooga imanaya Cupertino badanaa waxay leeyihiin naqshad wanaagsan waxayna bixiyaan khibrad aad u fiican oo isticmaale ah. Laakiin waa in la aqoonsadaa in wax kasta oo tufaax la xiriira aysan fiicnayn. "Kalitalisnimada" ay soo rogaan waxay leedahay dhinaceeda togan, sida amniga oo ka weyn nidaamyada kale ee hawlgalka ama in wax walba, ama ha soo saareen Apple ama kuwa saddexaad ay u shaqeeyaan si isku mid ah. Laakiin, dhinaca kale, soosaarida tufaaxa ayaa laga yaabaa inaysan had iyo jeer ka farxin dadka isticmaala, sida ay kari karto markay nagu qasbaan inaan isticmaalno qalabka rasmiga ah ama MFi on our iPhone, iPod Touch ama iPad.
Maqaalkani waxaan isku dayi doonaa inaan ka sifeyno shakiga badan ee la xiriira aaladaha iPhone-ka, labadaba kuwa ay abuurtay Apple, kuwa MFi shahaado haysta iyo kuwa aan midna midka kale. In kasta oo ay jiraan hal shay oo aad u badan tahay inaad hore u ogayd: kan qalabka tufaaxa Iyagu waa kuwa ugu qaalisan, oo ay ku xigto kuwa MFi-shahaado haysta ka dibna ay jiraan qalab kale oo aad uga jaban, laakiin ka khatar badan.
1 Waa maxay farqiga u dhexeeya qalabka rasmiga ah iyo midka aan rasmiga ahayn?
2 Maxaa dhacaya haddii aan isticmaalo fiilo aan asal ahayn oo aan ku soo dallaco iPhone-ka?
3 Sidee loo ogaadaa in xarigga asalka ah ama qalabku uu yahay shahaadada MFi?
4 Qalabyada aan asalka ahayn miyay ku shaqeeyaan iPhone-ka?
5 Waxa la sameeyo haddii farriinta "Xariggan ama qalabkan aan la caddeyn" u muuqdo
6 Maxay Apple kuu oggolaan doonin inaad ku isticmaasho qalab been abuur ah iPhone-ka?
Waa maxay farqiga u dhexeeya qalabka rasmiga ah iyo midka aan rasmiga ahayn?
Jawaabtu way fududahay: ka qaybgal. Tusaale ahaan, waxaa jira fiilooyin ka imanaya soosaarayaasha qalabka oo aad isugu eg, ku dhowaad sax ah, kuwa rasmiga ah, laakiin sidoo kale waxaa jira kuwo kale oo, sida maahmaahdu tiraahdo, "u eg ukun illaa xabad". Ukunta iyo laabta labaduba waxay leeyihiin qaab cawsan, laakiin qolofta iyo gudaha midkoodna shaqo kuma laha.
In badan oo ka mid ah qalabka Apple sida soosaarayaasha kale, waxaa jira hal shay oo aan ku caddeyn karno: kan shirkad samaysa qalab si sax ah ayuu u yaqaanaa habka soo raacay si loo abuuro, cabirkeeda iyo maxay yihiin dhibcihiisa daciifka ah. Tan waxaan ugala jeedaa waa haddii aan isticmaalno qalab rasmi ah, sida daboolida, way ku adag tahay iyaga inay waxyeelo u geystaan ​​qalabka. Haddii aan isticmaalno qalab aan rasmi ahayn, waxaa suurtagal ah in qalabkani xoogaa xoogaa xoogaa ah ka yahay aaladda, wax haddii, haddii ay dhacdo, xaaladda ugu fiican ay ka xoqdo qodob ka mid ah.
Marka laga hadlayo fiilada hillaac + iOS, fiilada leeyahay jab taas ayaa ogaan doonta haddii qalabku yahay mid rasmi ah ama ay soo saartay shirkad idman, oo siin doonta shahaadada MFi (Made For iPhone). Haddii macruufka uusan ogaan qashin la oggolaaday, ma shaqeyn doono.
Maxaa dhacaya haddii aan isticmaalo fiilo aan asal ahayn oo aan ku soo dallaco iPhone-ka?
Jawaabtu waxay la mid tahay su’aashii hore: way ku xidhan tahay. Waxba dhici maayaan Xaqiiqdii, tani waa waxa dhaca kiisaska badankood. Laakiin waxaan qatar u geli karnaa, sida qaar ka mid ah kuwa aan kor kusoo xusnay ama mid ka daran: waxaa jiray kiisas dhimasho ah adeegsiga fiilooyinka aan rasmiga ahayn. Waa inay cadaato in sababtu aysan ahayn rasmi, laakiin inay jiraan fiilooyin aan rasmi ahayn oo aad u xun, taasoo sababi karta daboolid xumo iyo waxaa laga yaabaa inaan la kulano shil koronto.
Dhanka kale iyo waliba inaan isku dhigno kiiska ugu xun, fiilo tayo liidata waxaa laga yaabaa inaanay si fiican u bixin Tanina waxay sababi kartaa wareegyo gaagaaban baytariguna wuxuu qaadanayaa waqti aad u yar, marka ma mudna in laga iibsado agabyada shirkadaha aan la jeclayn in loo isticmaalo qalab ka badan € 600, ma u malaynaysaa
Sidee loo ogaadaa in xarigga asalka ah ama qalabku uu yahay shahaadada MFi?
Waxa ugu fiican ee aan sameyn karno si aan u ogaano in fiilo ama qalab kale uu yahay shaashadda MFi inay tahay fiiri weelka. Sida aad ku arki karto sawirka, qalabka saddexaad ee loo yaqaan 'MFi' waa inuu lahaadaa sumad aan ku akhrin doonno "Made for" iyo ka hooseysa "iPod, iPhone, iPad".
Haddii aad rabto inaad aqoonsato fiilada hore ee hillaaca Apple, waa inaad eegtaa xadhig la saaray "Waxaa qaabeeyay Applein California" iyo "Isku urursaday Shiinaha," "Waxaa laguqiyaasay Fiyatnaam," ama "Indústria Brasileira" masaafo dhan 18cm (7 inji) oo laga cabiray isku xiraha USB, oo ay ku xigto lambar 12 lambar ah.
Talo ahaan, waxaan dhihi lahaa waxay mudan tahay in laga iibsado dukaamada jireed ee ku raaxeysta qaar caan ah. Dukaanka khadka tooska ah ee adduunka ugu muhiimsan aniga adduunka waa Amazon, laakiin sidoo kale wuxuu gacanta ku hayaa iibinta dhinac saddexaad, markaa waxaan iibsan karnaa wax aan ahayn (sidii aniga igu dhacday, waxaan iibsaday fiilo isku xiran sida CAT6 oo waxay ahayd CAT5e). Laakiin, dhanka kale, sidoo kale way ka adag tahay inay tan nagu dhacdo haddii waxa aan iibsano ay yihiin wax soo saar Aasaaska Amazon.
Qalabyada aan asalka ahayn miyay ku shaqeeyaan iPhone-ka?
Jawaab gaaban: maya. Inkasta oo ay kuxirantahay waxa loo fahmay "asalka". Asalka asalka ahi waa fiilooyinka uu Apple abuuro, laakiin sidoo kale waxaa jira fiilooyin aan asal ahayn, oo sidoo kale loo yaqaan saddexaad, way shaqeeyaan. Qalabka loogu talagalay inuu ku shaqeeyo iPhone-ka waa inuu buuxiyo shuruud, taas oo aan ahayn wax kale oo aan ahayn haysashada shahaadada MFi (Made For iPhone). Haddii soo saaruhu doonayo inuu u isticmaalo qalabkooda qalab iOS ah, waa inay la xiriiraan Apple oo ay u abuuraan sida looga sheegay Cupertino. Mar alla markii waxaas oo dhan Tim Cook iyo shirkaddu weyddiistaan ​​soo-saaraha agabka la dhammeeyo, qalabka ku jira (kan keliya) ayaa heli doona shahaadada MFi waxayna u shaqeyn doontaa dhibaato la'aan.
Waqtigan xaadirka ah waxaan ka hadlaynaa qalabka, ma aha oo kaliya fiilooyinka. Waxaa jira qalabka Bluetooth (sida headset ama qalabka ciyaarta ilaaliya) oo aan u baahnayn shahaadada MFi inay shaqeyso.
Waxa la sameeyo haddii farriinta "Xariggan ama qalabkan aan la caddeyn" u muuqdo
Xaqiiqdii waligaa kuma xirmin qalab ka kooban iPhone ama iPad fariinta soo socotana way soo baxday:
Fiiladan ama qalabkani ma shahaado sidaa darteed waxaa laga yaabaa inuusan ku shaqeyn karin iphone-kan
Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doonno haddii aan aragno farriintii hore waa inaan ku ducayno in qalabka aan soo iibsannay uusan ahayn mid aad qaali u ah. Laakiin waxaa jiri kara xal, inta aan leenahay JAILBREAK lagu sameeyay qalabkeenna ama waxaan rakibnay nooc nugul u ah JAILBREAK.
Haddaan horay u qabannay JAILBREAK, waxaan si fudud u sameyn doonnaa waxyaabaha soo socda:
Waan furannaa Cydia.
Waxaan raadinaa oo rakibnaa tweak Taageer Qalabka lagu Taageero 8.
Haddii aadan na weydiin dhamaadka rakibaadda dib ayaan u bilaabanay qalabka.
Iyo inaad ku raaxeysato qalabkeena aan rasmiga ahayn.
El tweak ku xusan es free waxaana laga heli karaa keydka BigBoss. Marka la rakibo, waxaan u adeegsan karnaa qalabka aan rasmiga ahayn sida haddii ay soo saartay shirkadda Apple lafteeda waxayna nooga tegeysaa farriinta ah in xariggan ama qalabkan aan la caddeyn.
Maxay Apple kuu oggolaan doonin inaad ku isticmaasho qalab been abuur ah iPhone-ka?
Waxaan u maleynayaa inay jiraan laba sababood oo waaweyn:
Sidii aan hore u soo sheegnayba, sababaha midkood ayaa ah amniga, aaladda iyo adeegsadaha labadaba. Xaaladaha dhimashada isticmaalka qalabka aan rasmiga ahayn waa muunad ka mid ah waxa dhici kara haddii aan isticmaalno fiilo tayo liidata, wax aan sidoo kale sharaxnay ma ahan inaysan rasmi ahayn, laakiin ay tahay soosaariddooda liidata.
Intaas waxaa sii dheer, sidaan sidoo kale soo sheegnay, sidoo kale waa inaan ilaalino aaladeena, maadaama aan isticmaali karno fiilo ay kujirto "burcad badeed" macluumaadkeenana waa la xadi karaa mahadnaqa jabkan wax laga badalay.
Sababta kale ee ugu weyn waa lacag, dabcan. Haddii aan wax walba ka iibsanno dukaamada Apple, ha ahaato dukaamada jirka ama Apple Store Online, Apple waxay sameyn doontaa lacag aad u badan. Xaqiiqdii, iibinta qalabka ayaa faa'iidooyin badan u leh shirkadda Cupertino, taas oo qiimaha sicirka ee kuwan sidoo kale wax ku biiriya.
Way cadahay in cidina aysan jecleyn in loo sheego waxyaabaha ay isticmaalayaan, laakiin ka iibsashada Apple waxaan ilaawnaa dhibaatooyinka. Inkasta oo ay haa tahay, qiimo sare. Maxay kula tahay Miyaad doorbidaa qalabka asalka ah ama kuwa aan asalka ahayn?
Haddii aad dhibaatooyin kala kulanto fiilada lacag-bixinta ama qalabka lagu rakibo, waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso kuwan heshiisyada ku saabsan fiilooyinka loogu talagalay iPhone oo ku shub iyada oo aan dhibaato nooc kasta oo ay tahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Sida loo adeegsado fiilooyinka aan rasmiga ahayn iyo agabyada ka shaqeeya iOS
Markaan ku xiro fiilo "aan la hubin" waxaan helaa fariinta waana intaas. Way rartaa oo si habsami leh ayey u shaqaysaa oo waxaan hayaa dhawr. Oo ka waran halista? Hagaag, maxaad rabtaa inaan kuu sheego waa fiilo. Waa cunsur fal ah, waxa kaliya ee dhici kara ayaa ah in ipadku uu si tartiib tartiib ah u qaadaayo maxaa yeelay dhumucda fiilada ayaa ka yar (oo xoog badan ma wareegi karto). Laakiin for iPhone dhibaato ah. Wax kale maahan
Fiilooyinka hillaaca wax shucuur ah ma wada laha, waa hagaag, waa sababta oo ah iyagu iskood kuma shaqeystaan ​​laakiin gudaha waxay leeyihiin jab la socda DRM iyo haddii aysan Apple caddeyn ka bixin, ma shaqeynayo ama uma shaqeynayso sidii la rabay. Waxaan hayaa fiilooyin ay fariintu ku soo boodayso oo ay ku sii socoto inay shaqeyso, kuwa kalena farriintu way iga booddaa oo si toos ah midna wax dacwad ah ama iskama dhejin karo iPhone.
Xitaa xarigga aan rasmiga ahayn ee ku sii socda inuu ku sii socdo 2009 iMac, wuu joojinayaa inuu sameeyo haddii aan ku xiro 2014 MBA.
Marka ay timaado qaadashada khatarta, waligey ma isticmaali doono xayndaab Shiine ah oo wata saacad iyo saacad qaylo dhaan ah haddii aysan Apple ka warqabin. Qof kasta oo sameeya waxa uu rabo, kuma ciyaarayo qalab koronto oo tayadiisu hooseyso. Sida iska cad fiilo kaligeed kaligeed ma qarineyso iPhone-kaaga, laakiin waxay kuxirantahay hadba qalabka ay ku xirmaan, khataraha ayaa badan.
Gali magaca buuxa ee tweak anda. Taageer Qalabka la Taageero 8, oo aan u muuqan uun magaca aad adigu ka horeysiisay darteed.
Diyaar, waxaan si qalad ah u tirtiray markii aan dhigayay geesinimada mana aanan ogeyn. Horaa loo saxay markaa aad baad ugu mahadsantahay digniinta 😉
Maqaal aad u wanaagsan, waxaan ku iibsaday Apple shahaado Apple ah oo loo yaqaan 'Mfi cable' oo ay la socoto shirkadda Amazon oo leh sumadda Bolse ee "loo sameeyay", waa nylon iyo 1,80m, waxay igu kacday € 18 waana qaatay sababta oo ah way ka dheer tahay kana adkaysi badan tahay tii hore.
Su'aashaydu waxay tahay kaybalkani ma u fiican yahay baytariga iphone 6? Miyey sii xumaaneysaa iyadoo aaney ahayn masuulka ama lacag ka yar?
Haddii fiiladu tahay MFi uma baahnid inaad ka walwasho, waxay kaa qaadeysaa oo u shaqeyneysaa sida ugu fiican oo kale haddii ay asalka ahayd. Sida mudada, waxay horeyba uguxirantahay usha aad siiso iyo sida aad ula dhaqanto. Salaan!
EDayaanna ( dijo
Waxaan ku weydiinayaa: tani ma Tweak-ga ayaa ah si uusan farriintu u soo bixin oo keliya? ama nidaamku inuu u oggolaado fiilada aan rasmiga ahayn inay si caadi ah u shaqeyso; Waxaan hayaa iPhone 5s waxaanan iibsaday dhawr fiilooyin oo aan ku soo dallaco oo ma shaqeeyaan, farriinta ayaa u muuqata oo ma rartaan anigu waxaan hore u soo iibsaday mid asal ah laakiin way fiicnaan lahayd in la ogaado haddii fiilooyinka kale ay la shaqeyn lahaayeen .
Jawaab Perseus Santa (@PERSEOSANTA)
Ka saar fariinta oo ka dhig qalabku inuu si caadi ah u shaqeeyo. Salaan!
My 7.1.2 ipod jailbroken ma shaqeeyo
On iPhone 5 ah oo leh iOS 8.1 ma shaqeynayo, la hubiyey.
On iPhone 5 uma shaqeeyo!
Iyadoo iphone 5 macruufka 8.1 JAILBREAK ma shuban
Xarigga Belkin ee sawirka waa la caddeeyay.
Ku jawaab lestatminiyo
Xaq, waan hayaa
UfDayaanna @ dijo
Nabade Nacho, gudaha iPhone 6 macruufka 8.1, isbeddelka ma shaqeynayo. Fariintu way sii kordheysaa. Fikrado kasta? Dhamaan wanaag!
Jawaab Patufet (@ Batista_78)
Jooji iibinta qiiqa, ma shaqeynayo ..
Jawaab Jt Martin
IPhone 5C iyo iPad mini oo leh iOS 8.1 wali ma rakibayaan xitaa xirashada nuxurkan, sidoo kale waxaa lagu tijaabiyay iPhone 5S iOS 7.0.4 oo xitaa ma dhigeyso tweak for iosas.
Ku jawaab Crocosergio
Horey ayaan ugu rakibay 7.1 mana shaqeynin iminkana 8.1 sidoo kale
Ku jawaab Tetix
UgoDayaanna 〰 (@xDayaannax) dijo
Ma awoodin inaan xaqiijiyo maxaa yeelay waxaan heystaa macruufka 8.1 iyo tufaax horey u sii daayay macruufka 8.1.2, laakiin sida muuqata Taageerada Qalabka Taageerada 8 kaliya wuxuu la shaqeeyaa macruufka 8.1.1
Jawaab Hugo @ (@hugo_loop)
Shiino Chinoco dijo
Midkoodna ma IOS 8.1.1 la hubiyey th. Tweakkan waa baqal !!
Jawabi Chino Chinoco
Waxaan soo iibsaday calaamadda adag ee la tijaabiyey ee MFi, waa shaqo culus, waan jeclaa xadhigga, laakiin dhawr bilood ka dib shaqadii way joogsatay, fiilada ayaa ku jirta xaalad kaamil ah, kaliya waxay ku dallacdaa haddii aan ipad-ka dansado, belkin MFi iyo isla wixii ku dhacay isaga, markaa ma inaad iibsato fiilada USB-ga Apple? taas oo jidka ag fadhida ay tahay qashin, si fudud ayey u jabtaa ...
Waxaan ku rakibay Iphone 5 IOS 8.1.2, markii horena aniga ima aysan shaqeyn, ilaa aan ka arkay inay tagayaan Settings -> SupportUnsupportedAcce ... (Ma arko wax kale shaashadda) iyo hawlgeli hawsha, aniga ahaan waxaan u naafo ahaaday.
Natiijooyinka?: Hagaag, ma arko farriinta iswaafajinta Cable-ka, laakiin sidoo kale calaamadda ay ku shaqeyneyso ma ahan (hillaaca).
Ka dib markii aan ku dhowaad 5 daqiiqo xirnaa fiilada, waxay umuuqataa in haddii ay aniga igu kacayso. Ma aqaano haddii ay noqon doonto sidii noocyadii hore ee IOS ee aan kuu sheegay in qalabku aanu is-waafaqsanayn, laakiin weli si ka sii gaabis ah ayuu u raagay.
Asalka asalka ah ee Apple cable, runtu waxay tahay xitaa waali maahan waxaan ku bixiyaa jajabkaas fiilo inkasta oo ay ii ogolaato inaan lacag qaato taleefanka, hadana wuxuu ku dambeeyaa kala daadashada caag / caag cad oo dhowr bilood ilaaliya.
Waxa kaliya ee aan ku arkay siligyada Shiinaha ayaa ah in Alxanleyaasha fiilooyinka ku xiran gudaha isku xiraha dhanka taleefanka ay yihiin mesh, waxaa u sii dheer xaqiiqda ah in ilaaliyaha caaga ah ee ka dhexeeya isku xirahan iyo fiilada ay u saamaxeyso inuu xariggu wareego iyo waxay ku dambeeyaan kala daadinta qaar ka mid ah 4-ta xarig ee gaara PCB-ga yar (halka uu jiifka caanka ku yahay) mararka qaar waxay soo saaraan farriinta is-waafajin la’aanta, (Mararka qaarkood!) iyaga oo si fiican u iibinaya (arag wanaagsan oo wanaagsan iyo garaaca wadnaha oo wanaagsan) fiilada ayaa si fiican mar labaad u shaqeysa, laakiin kaliya mararka qaarkood.
Hagaag, Sergio waa sax ... Loading gaabis laakiin rarid ... Waa wax!
Waxaan horeyba ugu fikiray inaanan adeegsan karin 10-1 fiilooyinka ee aan kusoo iibsaday dealextreme lol.
Jawaab Daniel Rubio Rocamora
Waxaan soo degsaday fiilada laydhka aan la fasaxin oo way shaqaysaa
Ku jawaab alexck
Xalka qaar, aniga oo leh iphone 6, ios 8.1 oo leh jb xal ma aanan helin, waxaan cusboonaysiiyaa macruufka 8.2 xal la'aanna, waxaa jira dad dhaqan galiyay damaanada oo way badaleen. Tan iyo markii aan ku sugnaa Arjantiin, ma beddeli karo, waa inaan aadaa waddan leh bakhaar tufaax leh oo iphone leeyihiin
Jawaab Sergio Espinoza
Muhiim maahan in la helo JAILBILY, fiilada malaha wax jab ah, waa adabtarada korontada ee USB oo aan kuu ogolaanayn inaad ku xirto fiilooyinka kale ee aan rasmiga ahayn, kaliya hagaaji kale, ha ahaato Samsung ama calaamada cad waxayna ku shaqaysaa dhib la'aan
Maryama J dijo
Waxaan hayaa iphone 4s waxaanan horey u iibsaday 2 fiilo oo labaduba Apple ma shahaado, iOS 7 way igu kacday markii aan damiyay, laakiin waxaan cusbooneysiiyay iOS 8.3 oo hada wax lacag ah ama damis iyo mid midna ma leh way iyo anigu ma haysto JAILBREAK. Maxaan sameyn karaa?
Ku jawaab Maria J
Maalin dhaweyd dukaanka alaabada lagu iibiyo ayay haweeneyda iibiye ii sheegtay in wixii ka dambeeya iPhone-ka xitaa uusan aqoonsan doonin xarigga asalka ah, maaddaama oo cusbooneysiinta iOS-ka ah ay diidi doonto wax fiilo ah, iminkana aan xusuusto, iPhone 5S-keyga ka hor inta aan lagu cusbooneysiin 8.3 raran. sifiican oo leh khad shiineys ah oo ah $ 1500 Chile pesos (2 € qiyaastii) laakiin cusbooneysiinta kadib dib dambe looma shubin. Waxay tiri waa inaad joojisaa shaqada cusbooneysiinta otomaatigga ah, laakiin waligey ma aqoon meesha iyo sida loo sameeyo 🙁
Ku jawaab Francisca
Waxaan hayaa 5S, waxaan iibsaday fiilooyinka Shiinaha, qaarna way shaqeeyaan qaarna ma iibsadaan, maxaa intaas ka sii badan, qaar waxay ku shaqeeyaan xarigyo qaar kamana shaqeeyaan kuwa kale, qaar waxay shaqeynayeen bilo oo isla markiiba fiidmeertii ma shaqeeyaan, qaarna ma joogaan 'Kama shaqeyn tan hore Si kastaba ha noqotee, waxaan u maleynayaa in fiilooyinka Shiinaha aad halis ugu jirto inaysan shaqeyn doonin, laakiin haddii ay shaqeeyaan, waxay ka tayo badan yihiin asalka.
Waad salaaman tahay saaxiib, wali waxaan helayaa ogeysiiska inuusan aheyn qalab isku xiran, maxaan sameyn karaa?
2 bilood ka hor waxaan iibsaday Cable «GRIFFIN Premium Flat USB Cable» oo si fiican u shaqeeyay hadana way joogsataa lacag bixinta waxayna boodhadhku u muuqdaan kuwo aan la jaan qaadi karin Taleefanka I Phone 5. Kahor iyada oo leh Fiilooyin jaban 1-2 bilood gudahood ayaa soo muuqday boosta laakiin hadda Griffin-ka oo ku kacay $ arg 300 waxaan sidoo kale leeyahay dhibaato la mid ah. Su’aashu waxay tahay haddii tani ay caadi tahay mise dhibaato ayaan ku qabaa Taleefanka I? Gracas
bisad chess dijo
Hal su'aal… maxaa dhacaya haddii aan u isticmaalo dekedda asalka ah fiilo burcad-badeed? Ma sidaas oo kale ayay u xun tahay? Sababta oo ah waxaan maqlay in dhibaatadu tahay dock been abuur ah oo diraya danab aan caadi ahayn.
Ku jawaab chesscat
Sawirka meeleynta Antonio Flores dijo
Waxaan iibsaday kiis koronto oo 5s ah waxayna ii sheegaysaa in qalabka aan la aqoonsaneyn, maxaan sameyn karaa?
Ku jawaab Antonio Flores
Waxaan hayaa Jailbreak 9.1 laakiin ma heli karo khalad si aan u isticmaalo fiilooyinka aan shahaadada haysan. Ma jiraa qof wax ka yaqaan? Midka lagu tilmaamay bilowga lama jaanqaadi karo iOS 9.1.
Waa wax laga xumaado in qalab qaali ah sidan oo kale nidaam xukun oo xun, waxaan hayaa aalado noocyo kala duwan leh oo ay ku jiraan kuwa wax qarxiya sanado ka hor iyo kuwa ka socda Cupertino wali way socdaan, way kala jajabi doonaan oo waxay u baahan yihiin inay sameeyaan "asalka" "Xadgudubka xargaha ee bilihii la soo dhaafay? qoomamo.
Gabi ahaanba waan ogolahay
Timaha Luisa dijo
Waxaan haystaa iphone-kii saddexaad, ipad iyo laba kombuyuutar oo Mac ah.Markuu aqoonsado fiilo aan soo saarin x waxay ka dhigayaan wax aan faa'iido lahayn inkasta oo ay ilaa iyo haatan shaqaysay. Waxay igu dhacday aniga oo wata aalado dhowr ah. Haddii ay sidan sii socoto, anigu kama iibsan doono badeecad kale shirkadda Apple. Ma jirtaa waddo looga baxo dabinkaas?
Ku jawaab Luisa cabello
hahaha xarigga siligga saddexaad waxaan xaqiiqsaday inay wax dhacayaan ho .. dabool waa inaan hadda iibsadaa asalka. Shirkadani way dhaaftaa, ma iibsanayso calaamaddan mar dambe, waxaan haystaa iPhone 6
Aad baan u murugooday markaan maqlay in Samsung qarxay. Laakiin shalay waxaan arkay saaxiibadaydii hore, cuntada caadiga ah ilaa aan gurigeeda geeyo oo aan ku xidho iphone-keeda iyo xeedho aan ku haysto gaadhigayga (aan rasmi ahayn)… taleefankuna wuu onkoday sida markaad samayso hadhuudhka soo baxa… JINSIYADA !!! Haa, ku dhowaad ma dhicin, laakiin waxay ku dhacday qofkeygii hore oo ku dhammaaday inuu albaabka gaadhigayga ku dhufto waxaanan u baahanahay inaan iibsado fiilo cusub maxaa yeelay taleefankiisa Iphone-ka ayaa iga jabiyey xadhigayga Shiinaha ...
Jawaab Alex Acostaalex
Waxaan u maleynayaa in siyaasaddan Apple aan ku joojin doono iibsashada wax soo saarkooda. Fiilooyinkoodu waa kuwo macaan oo qaali ah. Tufaax ayaa cabitaan u doonata….
Iga raali noqo, laakiin waa maxay sababta fiilooyinka asalka ahi ay qashin u yihiin (macno ahaan)? Waxaan isticmaalaayay iphone mudo sanado ah mar walbana waxaan la ildaranaa dhibaato isku mid ah, waa inaan iibsadaa oo aan iibsadaa fiilooyin iyo had iyo jeer kuwii asalka ahaa, iyo isticmaalka aan siiyaana waa wax caadi ah, waligeyna ma dalbado intaan aad u faquuqo, wax baan dhigayaa si loo ilaaliyo laakiin waxba, marwalba waxay kudhamaadaan jebinta naftooda, sababtoo ah ?? Waxa aniga aad iigu dhib badan ayaa ah in aan wali haysto fiilooyinkii Android ee aan isticmaali jiray 6 sano ka hor walina ay yihiin kuwo cusub, wali way shaqeeyaan, xitaa waxaan haystaa fiilo ka socota Nokia oo leh Symbian, taas oo si fiican u fiican, laakiin iPhone maya, waxaan dhahay maya Way dhib badnaan laheyd in waxbadan laga bixiyo wax soconaya uguyaraan dhowr sano, laakiin waa bilo kaliya, waa maxay sababta tan u dhaceysa ama qof ma garanayaa sida tan looga dhigo mid la qaadan karo? Mahadsanid
Waad salaaman tahay, waxaan u iibsaday USB cable-ka dheddigga ipad (asal ma ahan) qalad iswaafajin ayaa boodaya laakiin si sax ah ayuu u shaqeeyaa, waxa kaliya ee aan ku habooneyn sida ugu fudud ee fiilada xeedho ee asalka ah, waxaan ka baqayaa in tabka gudaha ee ipadku uu jabo , qof ayaa og haddii ay khatar tahay in la sii isticmaalo? Mahadsanid!
Ku jawaab Diegolom
Waad salaaman tihiin dhamaantiin. Waxaan kaliya iibsaday iPhone 6 nus-cusub oo leh fiilo guud, oo aanan hadda lacag ku haynin sidaa darteed waa inaan iibsadaa asalka oo layaabka ayaa ahaa inuusan shaqeyn; Waan geeyay adeegga waxayna ii sheegeen in aysan hayn wax ay iyagu ku soo oogeen oo ay ku shaqeyneyso xarig guud. Waxaan rabaa in aan ka fikiro in laga yaabo in dekedda amarka lagu beddelay jaangooyooyin halkaa ka socda oo kaliya ku eedeynaya fiilo asal ah MA AH Fiiladda asalka ah ee aan u isticmaalo inaan ku shubo ipad iyo haddii ay shaqeyso.
Jawaab Juan Rocha
"Isticmaalaha / macaamilka jacaylkiisa iyo ladnaantiisa", ee ay ku faanaan mogdisho iPhone, waa munaafaqnimo si khiyaano leh loo sameeyay. Nuxurka ayaa ah inay dareemayaan jacayl iyo sanam caabud laakiin… lacagta, iyagoo dejinaya sicirro xadgudub ah; si aad ah loo buunbuuniyey, oo ka baxsan dhammaan caqliga iyo caqliga aadanaha (qiimaha cutubka wax soo saarka), oo dhaawac culus u geysanaya miisaaniyadda macaamiisha muddada dheer silcayay. Dhaca dhabta ah ee loo yaqaan 'tie tie'!
Jawaab LUIS MANSILLA
Waxaan doorbidi lahaa kuwa asalka ah, laakiin waxaan u maleynayaa in Apple ay tahay inay taageerto oo daacad u ahaato adeegsadayaasheeda daacadda ah, xitaa inbadan oo leh qalab u eg inay waxyeello u geystaan ​​si dhakhso leh, waxaan u maleynayaa in haddii qiimayaashu horumariyaan dadku doorbidaan inay wax yar ku bixiyaan asalka , dhibaatadu waxay tahay in asal ahaan ay u joogsato wax yar uun, haddii aysan ka sii badnayn.
Jawaab Fidias Muñoz
Ra'yi uruurintu waxay muujineysaa taageerada dadka ee Apple ee FBI-da
Apple waxay soo dirtay 11.6 milyan Apple Watch sanadkii 2015